Ny Malagasy sy ny fiteny vary amin’akotry. – Blaogin'i Voniary
Anisan’ny lasa fahazarantsika Malagasy ankehitriny ny mampiasa ny fiteny mifangaro na koa ilay antsoina hoe fiteny vary amin’akotry. Tena nanimba ny kolotsaina Malagasy indrindra moa fa eo amin’ny fitenin-drazantsika ny tsy fahaizana mampiasa intsony ny teny gasy fa afangaro amin’ny teny hafa.
Ny tenindrazana tsy adinoina
Marina fa mandroso be tokoa ny fivoarana eto Madagasikara ary matetika aza dia efa nozarina hiteny amin’ny fiteny vahiny ny olona na any am-pianarana na any am-piasana. Tsy nentina natao hanadinoana ny tenindrazantsika anefa izany rehetra izany. Na dia eo aza ilay fahaizantsika miteny ny fitenin’ny hafa, ilaina ihany koa ary tena tsy maintsy hatao fahazarana mihitsy ny mampiasa ny tenindrazantsika.
» Andrianiko ny teniko, ny an’ny hafa feheziko »
Di na Henri Rahaingoson
Tsy nataotao foana io fitenenana iray io fa natao kosa mba hilazana amintsika fa ny tenindrazana mbola zava-dehibe lavitra kokoa noho ny teny vahiny satria io no entina maneho ny firenentsika amin’ny hafa.
Tsy voatery hanao vary amin’akotry
Ny antony hitsimponana vary dia ny hanalana ireny akotry sy ahi-dratsy ireny mba ho vary tena vary no andrahoana fa tsy hoe vary mifangaro zavatra hafa. Toy izany ihany koa ny fiteny, Malagasy ianao ary manana ny fitenin-drazanao izay mbola amin’ny teny Malagasy ihany koa. Fa nahoana indray ary no mbola hasiana akotry sy ahi-dratsy ihany ilay fiteny Malagasy izany hoe mbola afangaro amin’ny hafa ihany nefa ianao manana ny fitenin-drazanao izay azonao ampiasaina tsara mihitsy ?
Misy fiteny tsy hay ?
Matetika eo mihitsy ilay olantsika rehefa mampiasa ny teny Malagasy : misy karazana voambolana Malagasy tsy haintsika, hany ka lasa avadika amin’ny fiteny hafa ilay. Tiana ihany anefa ny mampahafantatra antsika fa azo atao tsara ary tena ilaina ny famakiana ireny boky nosoratana mpanoratra Malagasy ireny na koa ny fampiasana ny Rakibolana Malagasy. Tsy misy tokony ho sakana izany, raha ny marimarina kokoa betsaka ny fitaovana azo ianarana teny malagasy. Vokatry ny fivoaran’ny teknolojia amin’izao vaninandro izao ohatra dia efa misimisy ihany ireo miezaka ny manambatra ny talentany entiny hanandratana ny fiteny Malagasy.
Andeha hiaraka hanao ezaka
Tsy vita moramora ny mamerina ny hasin’ny teny Malagasy ho eo am-bavan’ny tsirairay kanefa rehefa eo ilay fiezahana ny hanandratra dia tsy maintsy tafaverina foana io. Ny tsirairay isam-batan’olona no tokony hanao io ezaka lehibe io dia tsy inona akory izany fa ny fanandratana ny teny Malagasy amin’ny fampiasana azy amin’ny tontolon’androm-piainantsika na amin’ny fotoana inona na amin’ny fotoana inona. Ny fanaovana an’io ezaka lehibe io dia efa anisany mitondra voka-tsoa ho an’ity tanindrazana malalantsika ity.
tenin-dreny, teny gasy, teny malagasy, teny vary akotry, teny vary vato, voambolana malagasy